Amathiphu ayi-10 wokonga imali ekuthengisweni kwamasheya Ezezimali Zomnotho
Vele, inhloso enkulu nokuwukuphela kwayo abatshalizimali abancane nabaphakathi abanayo thola imali ekusebenzeni kwakho ezimakethe zokulingana. Wonke amasu abo adlula kulo msebenzi okungelula ukufeza ngaso sonke isikhathi, njengoba uzokwazi kahle kokuhlangenwe nakho kwakho. Kodwa-ke, kunezinye izinhloso okungafanele zingabonakali ekuhlaziyweni kwakho kweqiniso lemakethe yamasheya. Akuyona enye ngaphandle kokuthi ngikusindise imali engenzeka kakhulu ezindlekweni ezikhiqizwa ekusebenzeni kwayo okuyinhloko. Kususelwa ekuthengeni nasekuthengisweni kwamasheya kulezi zimakethe zezezimali.
Lo msebenzi uzosebenza ngempumelelo enkulu uma ungomunye walabo abatshalizimali abenza imisebenzi eminingi minyaka yonke, noma izinyanga. Ngoba kufanele bacabangele ukuthi izindleko zakho zingakhuphukela ngaphezu kwamanani ahloniphekile. Yebo ugwema ukukhokha imali engaka Akungabazeki ukuthi izimbuyiselo zakho ezimakethe zamasheya zizolungiswa ngendlela engakumangaza kusukela manje. Ngaphezu kwalokho, yisikhathi esihle sonyaka ukuthi usebenzise leli su elisha lokuqukatha izindleko kuzo zonke izinqubo zokuphatha.
Ukukunikeza umbono wokuthi yini ongayisebenzisa kulowo nalowo mkhakha emakethe yamasheya, kwanele ukuthi ubheke ukunyakaza okuthile. Yebo, ngokuhlinzwa okuzungeze ama-euro angama-5.000 kuzokubiza cishe ama-euro ayi-15 wokuthengwa kwamasheya. Kuleli nani kuzofanele ungeze inani elifanayo lomsebenzi wokuthengisa. Njengomphumela walezi zibalo, izindleko eziphelele zokutshalwa kwemali zizoba kakhulu cishe ama-euro angama-30. Kuyizindleko ezingaguquki, kepha ungakulinganisa ngokuya ngecebo lokonga ozolisebenzisa kusukela manje kuqhubeke. Siphakamisa eminye imibono ukunciphisa lokhu kukhishwa futhi okususelwa kuzenzo ezilandelayo.
1 Sebenzisa ngokunenzuzo amanani akwi-inthanethi
2 Qasha isilinganiso esiphansi
3 Musa ukwenza imisebenzi emincane
4 Lungisa izintengo zokuthenga
5 Khetha ukusebenza okuhle kakhulu
6 Khetha okunikezwayo okunenzuzo enkulu
7 Kungcono kuzwelonke kunakwamanye amazwe
8 Amapulatifomu okutshalwa kwezimali
9 Hlaziya amanani
10 Ukushayela ngamabhendi ashibhile
Sebenzisa ngokunenzuzo amanani akwi-inthanethi
Ukusebenza ngezindlela zobuchwepheshe kunomklomelo wabatshalizimali abancane nabaphakathi. Amanani abo angancishiswa cishe ngama-20% futhi ikumema ukuthi usebenzise lesi silinganiso sokusebenza. Hhayi ize, kuvame kakhulu ukuthi imisebenzi yokuthenga neyokuthengisa ithuthukiswe kusuka kwikhompyutha ngisho nakwezingcingo eziphathwayo. Ngalo mqondo, izinhlangano zivula imikhuba emisha yamakhasimende azo. Ngaphandle kokunikela nganoma iyiphi inzuzo noma inzuzo. Ngaphezu kwalokho, ungabhalisela amasheya ngesikhathi sangempela njengenye yezinzuzo zayo ezifanele kakhulu. Awukwazi ukukhohlwa ukuthi amanani e-inthanethi emakethe yamasheya manje asencintisana kakhulu kubo bonke abatshalizimali.
Qasha isilinganiso esiphansi
Uma kwenzeka bengabatshali zimali abasebenza kakhulu emisebenzini yakho emakethe yamasheya, ngeke ube nokhetho ngaphandle kokuthola inkontileka yalesi silinganiso esingaguquguquki nesinyanga zonke. Ngemali efanayo ungenza imisebenzi eminingi ngendlela ofuna ngayo, kokubili ukuthenga nokuthengisa. Akunamkhawulo futhi ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lwemikhawulo. Intengo yesilinganiso seflethi okwamanje cishe ama-20 kanye nama-30 emisebenzini kazwelonke futhi cishe ama-euro angama-50 lawo enziwe ekuhwebeni kwamasheya kwamazwe omhlaba. Ngale ndlela, uzokwazi ukubeka imali eningi kunalokho obukucabanga ekuqaleni ngemuva kwezinyanga eziyishumi nambili. Ngeke ube nezinkinga ezeqile ukwenza lelisu ngoba amabhange nezinkundla zezimali zivulele lo mkhuba omusha ekuthengisweni kwezimali ezimakethe zamasheya.
Musa ukwenza imisebenzi emincane
Uma ufuna ukwandisa ukusebenza ezimakethe zamasheya, ngeke ube nokhetho ngaphandle kokuhlanganisa kabusha imisebenzi, kungaba ukuthenga noma ukuthengisa. Ngalo mqondo, kufanele ukhumbule ukuthi imisebenzi emincane emakethe yamasheya ikhona bajeziswe ngamakhomishini aphezulu ngokulingana. Ngoba empeleni, akukubuyiseli ukwenza lezi zinhlangano ezimakethe zezimali. Ngoba ekugcineni kosuku uzokhokha imali ethe xaxa futhi kuzokubiza kakhulu ukwenza ukutshalwa kwemali kube nenzuzo. Ukuqoqa i-oda lokuthenga kuhlala kunika imiphumela emihle uma isu lokutshala imali lisebenza ngempela.
Lungisa izintengo zokuthenga
Yize lolu hlelo lungakuthinti ukuncishiswa kwezindleko, luvumela inzuzo yemisebenzi ukuthi ikhule kakhulu. Ngalo mqondo, kufanele unikele ngentengo ekunyakazeni kokungena futhi akunakwenzeka ukuthi wenze i-oda ngentengo yemakethe. Yebo, kulokhu ungalahlekelwa ama-euro amaningi ekusebenzeni. Ikakhulukazi uma ngabe isikhathi esikhethiwe sifushane, lapho umehluko omncane kakhulu. Akumangalisi ukuthi ukubeka intengo yemakethe kuyiphutha elenziwa ngabatshalizimali abancane nabaphakathi abanolwazi oluncane ekuhwebeni emakethe yamasheya. Akunjalo ngabatshalizimali abachitha iminyaka neminyaka yokufunda. Ungakhohlwa kusukela manje kuqhubeke uma ufuna ukwenza imali iphumelele.
Khetha ukusebenza okuhle kakhulu
Sekuyisikhathi sokuthi ungatshali imali ngaphandle komqondo ngoba ngaphandle kwemiphumela emibi yalezi zinhlangano, akungabazeki ukuthi uzosebenzisa imali ethe xaxa kumakhomishini nakwezinye izindleko ekuphathweni nasekunakekelweni. Ngakho-ke, awunakho okunye ongakwenza ngaphandle kokuba uhlakaniphe kakhulu ezinqumweni okufanele uzenze ezimakethe zezezimali. Ukusekela kuphela imisebenzi ongayicabangela njengoba kunenzuzo enkulu nangokuhlaziywa okuningiliziwe kwalokho ongakufinyelela ngabo. Kulesi simo, ngeke kulimaze ukuqeda yonke imisebenzi engeyona amasu futhi enganikeli ngalutho esitatimendeni sakho semali engenayo. Njengoba ukwazi ukubona, kuzoba nokusebenza okungaphezu kokukodwa kwalezi zici onyakeni ngamunye wokuhweba.
Khetha okunikezwayo okunenzuzo enkulu
Vele, elinye lamathiphu awusizo wokufeza leli qhinga lilele ekufuneni okunikezwayo okuhle kakhulu emakethe. Akumangalisi ukuthi amakhomishini asemakethe yamasheya angakwazi ziyahluka ngama-30% kusuka kwesinye isiphakamiso kuya kwesinye. Lapho empeleni et unikeza insizakalo nokuhlinzekwa okufanayo. Kungani ukhokha imali ethe xaxa yokuthenga nokuthengisa amasheya emakethe yamasheya. Kuyinto engenangqondo engangabazeki ukuthi izothinta i-akhawunti yakho yokuhlola futhi ngaphezu kokucabanga kwakho kwasekuqaleni. Ukuguquguquka kwamanani kungenye yezinto ezijwayelekile kuleli klasi lokusebenza. Yebo, kufanele usebenzise lesi simo ngamanani owethulwe wona.
Kungcono kuzwelonke kunakwamanye amazwe
Akufanele ube nesidingo sokushiya imingcele yethu ukuze utshale imali oyilondolozile emakethe yamasheya. Akumangalisi ukuthi inzuzo yama-indices ahlukahlukene omhlaba ifana kakhulu, kepha uma ukwenza ngamasheya kazwelonke uzokonga imali kumakhomishini. Ngoba impela, banamanani ashibhile kubo bonke abasebenzisi. Futhi ngokukhethekile ukuthi ungaba nemiphumela efanayo. Akumangalisi ukuthi ezimweni eziningi akudingekile ukuya ezimakethe zomhlaba wonke ukwanelisa isifiso sakho sokutshala imali emakethe yamasheya. Lawa ngamanye amaphutha avame kakhulu enziwa ngabatshalizimali abanolwazi oluncane ezimakethe zezezimali futhi kufanele ngabe usuvele uyakwazi.
Amapulatifomu okutshalwa kwezimali
Futhi akufanele ubheke kuphela esikhungweni sendabuko sezimali ukwenza imisebenzi yakho ezimakethe zezimali. Vele akunjalo, kepha ezikhathini zakamuva uchungechunge lwamapulatifomu edijithali anikwe amandla ahlinzeka ngamanani wokuncintisana ngempela kumakhomishini. Ukufika lapho ungonga khona cishe i-50% yezindleko ezitholwe ekuphathweni kokuthengwa nokuthengiswa kwamasheya. Noma kunjalo, kufanele ukhethe amapulatifomu owasebenzisayo nikeza ukuphepha okuningi kanye neziqinisekiso. Futhi ngaphezu kwakho konke lokho kulawulwa yiNational Securities Market Commission (CNMV). Ukuze ngale ndlela, ugweme noma yiziphi izimanga ezingezinhle ngesikhathi senqubo yokutshala imali. Uma kungenzeka ukuthi ungakwazi ukuqhuba ukunyakaza ezimakethe kusuka efonini yakho ephathekayo.
Elinye lamasu ongawasebenzisa kusukela manje ukuthuthukisa ukuhlaziywa okuningiliziwe kwamanani wamakhomishini asemakethe njengamanje. Kuzofanele unikele isikhathi esithe xaxa kulo msebenzi, kepha-ke imiphumela izokwanelisa kakhulu ngoba ekugcineni kosuku uzofinyelela umgomo wakho owufisa kakhulu. Ukuthi akuyona enye ngaphandle kokuqasha isilinganiso esinenzuzo enkulu futhi ngale ndlela uzokonga ama-euro amaningi minyaka yonke. Ngaphandle kokudela noma yini emkhakheni wokutshala imali, okuyiyona nto oyifunayo. Uzobona umehluko omkhulu phakathi kwamanani ezikhungo zezimali.
Ukushayela ngamabhendi ashibhile
Futhi njengenye indlela yokugcina, akukho okungcono ukwedlula ukwenza imisebenzi yakho emakethe yamasheya ngaphansi kwamaqembu akhona ukuncintisana kakhulu. Lapho ungasheshisa khona inani okwenziwa ngalo imisebenzi emakethe yamasheya. Ngaphambi kokuthenga, kufanele wazi iphesenti elizokhokhiswa enhlokodolobha etshaliwe. Kungaba yingxenye engezansi yesilinganiso ngakho-ke umoshwa ukwenza lo msebenzi ngomunye umnikelo wezomnotho onenzuzo enkulu. Akumangalisi ukuthi amanye amabhange akhokhisa ama-euro ayishumi ngemali engafika kuma-euro ayizi-10 5.000. Ngalo mqondo, kuzofanele usondele kulawa mazinga ukuze umsebenzi uzuze kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Amathiphu ayi-10 wokonga imali ngokuhweba ngamasheya